I-Kyrgyzstan Visa | Faka isicelo seKyrgyzstan eVisa | natvisa.com
Isicelo saseKyrgyzstan seVisa esikwi-Intanethi
Abemi bamazwe aphesheya bamazwe angaphezu kwama-50 banokutyelela eKyrgyzstan kukhenketho nge-eVisa esemthethweni ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90. I-visa yaseKyrgyzstan ekwi-intanethi idlula kwisicelo esisemthethweni se-visa kwindlu yenxusa. Emva kokugcwalisa iinkcukacha zobuqu ezibalulekileyo, zokuhamba kunye nenombolo esebenzayo yepasipoti kwisicelo se-visa, abantu bafumana i-visa e-Kyrgyzstan nge-imeyile. Inkqubo yokuhlawula ikwi-intanethi. Umfaki-sicelo kufuneka aqinisekise ukuba zonke iinkcukacha zichanekile, kwaye akukho mpazamo kulwazi olunikezelweyo njengoko oko kunokukhokelela ekungavunyelweni.
Iindidi zeVisa yaseKyrgyzstan
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-60 enye Faka isicelo ngoku
Ishishini le-eVisa Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-60 multiple Faka isicelo ngoku
ITrans eTVisa Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-5 enye Faka isicelo ngoku
Uhambo lokudlula eKyrgyzstan
Ukwenza isicelo se-eVisa eKyrgyzstan, abafaki-zicelo kufuneka banikezele uxwebhu oluthile kwifom yesicelo se-eVisa. Amaxwebhu ekufuneka eskenisiwe kwaye angeniswe yikopi eskeniweyo yepaspoti yomenzi-sicelo kunye nefoto yomenzi-sicelo.
Naluphi na ulwazi malunga nenqanaba le-visa luya kwaziswa kubafakizicelo, kwii-imeyile zabo. Ngaphaya koko, i-visa evunyiweyo nayo ithunyelwa ngeposi. Ke ngoko, ukuba ne-imeyile kubaluleke kakhulu kubo bonke abafake izicelo abenza isicelo se-eVisa.
Uxwebhu olulandelayo olubalulekileyo ekufuneka umhambi abe nalo yipasipoti efanelekileyo. Abantu abanakho ukuhamba nencwadana yokundwendwela ephelelwe lixesha. Ke ngoko, qiniseka ukuba ngaphambi kokuba ufake isicelo sevisa, incwadana yokundwendwela isebenza okungenani iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iindwendwe ezine-eVisa zivunyelwe ukungena nokuphuma e-Kyrgyzstan kuphela kwiindawo ezithile zokutshekisha. Ezi ndawo zokujonga zibekwe kwi Isikhululo senqwelomoya saseManase, I-Dostuk-avtodorozhnyi, I-Chon-Kapka-avtodorozhnyi, I-Bor-Dobo-avtodorozhnyi, Kulundu-avtodorozhnyi, I-Chaldybar-avtodorozhnyi, I-Ak-Tilek-avtodorozhnyi, I-Kyzyl-Bel-avtodorozhnyi, I-Irkeshtam-avtodorozhnyi kwaye Isikhululo senqwelo moya kwisikhululo senqwelomoya e Torugart-avtodorozhnyior Osh. Ngaphandle kwezi zibuko, iindwendwe zinokungena kwaye ziphume ngomda wokuwela umda owaziwa ngokuba yiAk-Jol. Inqaku lifumaneka kumda weRiphabhlikhi yaseKazakhstan.
Visa iKyrgyzstan Visa
Xa ufika eKyrgyzstan kufuneka ubonise i-visa yakho evunyiweyo kwaye eprintiweyo. Ngaphandle kolu xwebhu, ungeno lwakho luza kucinywa.
Iindwendwe kufuneka ziphathe ipasipoti efanelekileyo kunye nabo. Bayacelwa ukuba bayibonise le nto kwabasemagunyeni xa befika eKyrgyzstan.
Iinkcukacha zeKyrgyzstan Visa
Yintoni i-Kyrgyzstan eVisa?
Abahamba ngeenyawo bathanda ukutyelela amazwe ahlukeneyo, baphonononge imbonakalo yabo entle, ukutya nenkcubeko. Nangona kunjalo, owona mceli mngeni omkhulu abajamelana nawo kukufumana i-visa. Ukuhamba kuwo onke amaphepha kunye nokulinda emigceni kwindlu yozakuzo yonke imini ayisiyonto umntu akhangele phambili kuyo. Ukwenza kube lula kubakhenkethi, urhulumente wase Kyrgyzstan wazise ngeVisa ye-elektroniki ngoSeptemba ngo-2017. Oku kuncede abakhweli abavela kumazwe angaphezu kwama-50 ukuba bafake izicelo kwi-intanethi kwaye bafumane ne-Visa yokuya e-Kyrgyzstan.
I-Kyrgyzstan ibonelela ngeentlobo ezi-3 ze-eVisas - Ukhenketho lwe-eVisa, iTV eVisa kunye neShishini yeVisa. Undwendwe olunencwadana yokundwendwela esebenzayo inokufaka isicelo sayo nayiphi na kwezi visa, ngokusekelwe kwimfuno yazo. Ngelixa iiVisa zabakhenkethi kunye nezeShishini zivumela abakhweli ukuba bahlale kweli lizwe ixesha elingangeentsuku ezingama-60, abantu abaneVisa lokuThamba banokuba kweli lizwe iintsuku ezi-5.
Ungasifaka njani isicelo se-Intanethi kwiVisa yaseKyrgyzstan?
Inkqubo ye-elektroniki yokufumana i-eVisa yinkqubo elula nelula. Oku kuvumele abafaki-zicelo abavela kumazwe ahlukeneyo ukuba benze isicelo solu xwebhu nakweyiphi na indawo, ngaphandle kokundwendwela kwindlu yozakuzo. Amanyathelo okufaka isicelo sevisa ngale ndlela ilandelayo:
Gcwalisa ifomu lesicelo: Faka isicelo se-eVisa eKyrgyzstan ngokugcwalisa ifom yesicelo. Eli linyathelo lokuqala lenkqubo yokwenza isicelo. Khuphela ifom kwiwebhusayithi karhulumente kwaye ugcwalise yonke ingcaciso ngokuchanekileyo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Ukuzalisa ifom yesicelo kulandelwa kukungeniswa kwamaxwebhu abalulekileyo. La ngamaxwebhu abalulekileyo afunwa ngabasemagunyeni ukwenza isicelo sakho se-eVisa.
Yenza intlawulo: Gcwalisa inkqubo yokwenza isicelo sevisa ngokuhlawula umrhumo wevisa. Njengoko le nkqubo yenziwa kwi-intanethi intlawulo inokwenziwa kusetyenziswa nayiphi na indlela ekwi-Intanethi enje ngekhadi elifanelekileyo okanye ikhadi ledebhithi.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-eVisa ukuya eKyrgyzstan
Abahambi akufuneki bathenge itikiti labo lomoya ukuya eKyrgyzstan ngaphambi kokuba benze isicelo se-eVisa kwilizwe.
Nje ukuba abakhenkethi bafike eKyrgyzstan, kufuneka babhalise ihotele okanye indawo yokuhlala abayenzileyo, ngeentsuku ezi-5 zokufika kwabo.
Ngelixa abemi bamazwe amaninzi kufuneka bane-eVisa yokungena eKyrgyzstan, ukukhululwa kwenzelwe amazwe athile.
I-Kyrgyzstan Visa yokuFumaneka kweLizwe
Abemi baseArmenia, eTajikistan, eCuba, eKazakhstan, eAzerbaijan, eRussia, Belarus, North Korea, Georgia, Japan, Moldova naseVietnam banokuhlala eKyrgyzstan ixesha elingapheliyo ngaphandle kwevisa.
Abemi baseUkraine naseMongolia bangahlala e-Kyrgyzstan visa-mahala iintsuku ezingama-90.
Abemi baseTurkey naseMalaysia bangahlala iintsuku ezingama-30 eKyrgyzstan ngaphandle kwevisa
Abemi base Saudi Arabia, South Korea, Australia, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, United Arab Emirates, Brunei, Uzbekistan Canada, Kuwait, United Arab Emirates, Monaco, New Zealand, Qatar, Singapore, United States, neVictoria City bahlala eKyrgyzstan Iintsuku ezingama-60. Oku kukwasebenza kubemi abavela kwi-European Union / EFTA, ngaphandle kwabemi baseCyprus, eRomania naseBulgaria.
Ibaluleke kangakanani i-eVisa yabakhenkethi baseKyrgyzstan?
I-eVisa yoKhenketho yaseKyrgyzstan lelona xwebhu lubalulekileyo oluza kufunwa ngumhambi ngamnye ukuba uceba ukutyelela eKyrgyzstan. Ngaphandle kolu xwebhu, abayi kuvunyelwa ngaphakathi kweli lizwe.
Liliphi ixesha elisebenzayo le-eVisa eKyrgyzstan?
Ubunyani be-eVisa ukuya eKyrgyzstan bungaqala kwiintsuku ezi-5 ukuya kwiintsuku ezingama-60, kuxhomekeke kuhlobo lwevisa endiyenzileyo.
Ndidinga naluphi na uxwebhu ukuze ndenze isicelo se-eVisa yaseKyrgyzstan?
Ewe kuya kufuneka ulayishe la maxwebhu alandelayo xa usenza isicelo se-eVisa -ikopi esencwadini yokundwendwela kunye nefoto yomenzi-sicelo.
Ngawaphi amaxwebhu endifanele ndibe nawo xa ndifika eKyrgyzstan?
Kuya kufuneka ube nevisa yaseKyrgyzstan kunye noxwebhu lokuhamba xa ufika eKyrgyzstan.
Ndingayifumana imbuyekezo, ukuba isicelo sam se-eVisa siyaliwe?
Hayi, akuyi kubakho mbuyiselo yomrhumo wevisa ukuba isicelo sevisa asaliwe.
Nje ukuba ndifumane i-eVisa, mangaphi amangenelo ndivumelekile eKyrgyzstan?
Kuxhomekeka kwivisa oyifakileyo, uvumelekile ukuba ungene kunye kunye kunye nokungena.
Ithini indlela yokundwendwela xa usenza isicelo se-eVisa eKyrgyzstan?
Qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni esebenzayo ixesha eliziinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Ndimele ndiyihlawule njani imali yaseKyrgyzstan ye-eVisa?
Unokukhetha nayiphi na indlela yentlawulo ekwi-intanethi enje ngetyala elifanelekileyo okanye ikhadi ledebhithi lokuhlawula.
Ndingalufumana njani ulwazi malunga nesicelo sam sevisa?
Uya kufumana lonke ulwazi malunga nesicelo sakho se-visa kwi-imeyile yakho.
Kufuneka ndiye phi ndiyokufumana i-eVisa yam?
Awudingi ukuya naphi na ukuze ufumane i-visa yakho. Iya kuthunyelwa kwi-imeyile yakho ye-id.